Land Rover ထုတ်လုပ်သူများအတွက်သော့ခွံ China Key Land Land Rover စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက်
Land Rover အတွက် Key shell
LAND ROVER Range Rover Sport LR3 Discovery အတွက်ခလုတ်ခုံ Fob3ခလုတ်အစားထိုး Shell ခေါက်
အစားထိုး Shell ခေါက် Flip Remote Key Case - LAND ROVER အတွက်ခလုတ် ၃ ခလုတ် Range Rover Sport LR3 Discovery အခြေအနေ: ၁၀၀% Brand New အရောင်: Black Button:3BTN Key Blank: Yes Transponder Chip: လျှပ်စစ်မီး၊ ဘက်ထရီမရှိ: ထူးခြားချက်များ: 1. အကောင်းဆုံးနေရာတွင်အစားထိုးခြင်း ကျိုးသော့ခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခတ်ထားသောအမှုနှင့်သော့ခတ်သည်။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. ဓားသွားကိုဒေသခံသော့ခတ်သူ / ကုန်သည်မှဖြတ်ယူပါသို့မဟုတ်သင်၏မူလနှင့်အတူဓါးကိုလဲလှယ်ပါ။ ပြည်တွင်းအီလက်ထရွန်ကိုယူပါ။
Landver Rover Blank Key Case Case အတွက် Landrover Sport LR3 Discovery အတွက် Fob2ခလုတ်များဖြတ်တောက်ထားသောဓါးသွားအဝေးမှကားသော့ခုံအဖုံးအတွက်
Land Rover Blank Key Case အဖုံးအတွက် Fob2ခလုတ်များ Uncut Blade အဝေးထိန်းကားသော့ Shell Landrover Sport အတွက် LR3 Discovery အခြေအနေ - ၁၀၀% Brand New အရောင် - ရုပ်ပုံပြသကဲ့သို့ခလုတ် - ၂ Button Key Blank: ဟုတ်ကဲ့ Transponder Chip: No Electronics / Battery: No အလေးချိန် - ၃၀ ဂ။ အင်္ဂါရပ်များ - ကျိုးထားသောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခလောက်များနှင့်သော့ကိုအစားထိုးခြင်း။ 2.Key ကိစ္စသာ။ အဘယ်သူမျှမအီလက်ထရောနစ် internals ။ ဤသည် aftermarket အစားထိုးအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကိုသုံးပါ။ (immobilizer / transpond ပါဝင်သည်။ )
Jaguar F-Pace F-Type XE XF XJ အတွက် Land Rover Range Rover Sport LR2 LR4 အတွက်ပြုပြင်ထားသော Key Shell
Land Rover Range Rover Sport LR2 LR4 အတွက် Jaguar F-Pace အတွက်ပုံစံသစ် XE XF XJ အဆင့်မြှင့်ထားသောအဝေးထိန်းအခွံအခြေအနေ - ၁၀၀% အသစ်အရောင် - အနက်ရောင်ခလုတ်များ - ခလုတ်များ - ၅ ခုခလုတ်ပေါင်းထည့်စက် - အီလက်ထရောနစ် / ဘက်ထရီ - အလေးချိန်မရှိ - ၆၃ ဂအရွယ်အရွယ်အစား - ၆.၁ စင်တီမီတာ * ၃.၇ စင်တီမီတာ * ၁.၂ စင်တီမီတာ (L * W * H) အင်္ဂါရပ်များ - ကျိုးသောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခလောက်ဖြင့်သော့ကိုအစားထိုးခြင်း။ အဓိကကိစ္စသာ။ အဘယ်သူမျှမအီလက်ထရောနစ် internals ။ ဤသည် aftermarket အစားထိုးအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကိုသုံးပါ။ (immobilizer / transponder c အပါအဝင်)
၂ ခလုတ် Land Rover C50 အတွက်အဝေးထိန်းကားသော့ခတ်အခွပ်ခံကားတာရှည်ခံကာအလွတ်အစားထိုးခြင်း Keyless Entry Fob အဖုံး
၂ ခလုတ် Land Rover အတွက်ကားအဝေးထိန်းကားအဖုံး Shell Case 50 အလိုအလျောက်တာရှည်ခံပြီးအလွတ်အစားထိုးခြင်း Keyless Entry Fob အဖုံးအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Item Name: Land Rover အတွက် Remote Control ကားသော့အိတ်အလေးချိန်: 20g / pcs ခလုတ်များ - ခလုတ် ၂ ခု - ဓါးသွား - မရှိဓါးပစ္စည်း - ABS + Metal Transponder Chip - အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်၊ စတစ်ကာများ - မရှိ (အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူရောင်းရန် Aliexpress တားမြစ်သည်!) သွင်ပြင်လက္ခဏာများ: 100% Brand New နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ခြင်း! ကျိုးပဲ့သို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသော့များအတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုး, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး အပိုဆောင်းသော့ချက်အဘို့ကြီးသော။ အဓိကကိစ္စရပ်နှင့်သော့ ...
Land Rover Discovery အတွက် Button Remote Key Shell Fob Case4Sport Evoque Freelander23 LR2
Land Rover Discovery အတွက် Button Remote Key Shell Fob Case4Sport Evoque Freelander23 LR2 ပစ္စည်းဖော်ပြချက်: Fit: Land Rover အတွက်ကားသော့ Shell အခြေအနေ: ၁၀၀% ကုန်ပစ္စည်းအသစ်: ABS + သတ္တုခလုတ်များ - ခလုတ် ၅ ခု - အနက်ရောင်အလေးချိန် - ၅၀ ဂရမ် Key Blade: Uncut Blank Blade Transponder ချစ်ပ် - မည်သည့်အီလက်ထရွန်နစ်ဘုတ်များမှမရှိ၊ ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသူ - ရှိသည်။ လျှောက်ထားရန် - Land Rover Discovery3LR3 နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံနှင့်တူသောအခြားမော်ဒယ်များအတွက်! သတိပြုရန်: ဤအရာသည်အချည်းနှီးသောသော့တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
ကားအသစ် Key Fob Shell Case Land Rover Range Rover အားကစားအတွက် ၂၀၁၀-၂၀၁၅ အတွက်ကားအသစ် Black Remote Key Replacement Case
ကားအသစ် Key Fob Shell Case Land Rover Range Rover Sport အတွက် ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ဖော်ပြချက်အတွက်ကားအနက်ရောင် Car Remote Key Replacement Case - ၅ ခေါက်ဝေးလံသောသော့ခွံ။ အရောင်: အနက်ရောင်ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ်အရွယ်အစား: 7x4x2cm / 2.76″ x1.57″ x0.79″ (L * W * H) ဤပစ္စည်းသည် OEM မဟုတ်သောကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အတွက်: ၂၀၁၀ ~ ၂၀၁၅ Land Rover Range Rover အားကစား ၂၀၁၀ ~ ၂၀၁၅ Land Rover Range Rover 2012 Land Rover Range Rover Evoque 2010 ~ 2015 Land Rover LR4 မှတ်ချက် - အဓိကကိစ္စနှင့်သော့ချက်သာဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမအီလက်ထရောနစ် internals ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Land Rover Range Rover အားကစား Evoque Discovery4အတွက် Jaguar Freelander XFL XE XJ Smart Remote Car Key Shell5Button အတွက်
Land Rover Range Rover အားကစား Evoque Discovery4အတွက် Jaguar Freelander အတွက် XFL XE XJ Smart Remote Car Key Shell5Button Item ဖော်ပြချက်: Fit: Land Rover Discovery အတွက်ကားသော့ Shell4Sport Evoque Range Rover Jaguar Freelander အတွက် XFL XE XJ အခြေအနေ: 100% Brand ပစ္စည်းအသစ်: ABS ခလုတ်များ - ခလုတ် ၅ ခုအရောင် - အနက်ရောင်အလေးချိန် - ၅၀ ဂ Transponder ချစ်ပ် - အီလက်ထရောနစ်ဘုတ်များ - မရှိဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ - ရှိသည်။